Vakinankaratra : miala i Beriziky, miala Razanamahasoa (+vidéo)
Lohahevitra telo goavana no nentin’ny CT avy any Ambohimandroso hanehoana ny fahitany ny zava-misy amin’izao fotoana. Tomponandraikitra ambony maromaro no voaresaka nandritra izany ary tena nahitsy tanteraka ny fomba nanambarany ny momba azy ireo. Isan’ny zava-dehibe nambarany ihany koa ny tsy maintsy hiverenan’ny FIloha RAVALOMANANA na dia sakanana mafy aza izany.
« Nivadika tamin’ny teny nifanomezana ianao » hoy i Sely raha niresaka momba an’i Omer Beriziky ny tenany. Takian’i Vakinankaratra araka izany ny hialan’ity praiministra ity satria tsy mahafehy ny mpikambana ao amin’ny governemantany izy. Araka ny tatitra nataon’ireo ministra avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA mantsy dia tsy izay volavolan-dalàna niaraha-nanapaka tao anaty filan-kevitry ny governemanta no natolotra ny parlemanta fa izay nokotrehin’ny ministry ny fitsarana an’ny FATE mangingina tany.
Andrasana eny Tsimbazaza …
« Miandry anao eny Tsimbazaza izahay amin’ny alarobia izao ». Fampiantsoina no nataon’ity mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita ho an-dRazanamahasoa Chrisitine fa tsy fiangaviana. Amin’ny tany Repoblikana manko dia zon’izay milanja ny andraikitrin’ny solon-tenan’ny vahoaka no manao izany fampiantsoana tomponandraikitra anatin’ny fahefana mpanatanteraka izany. Raha ny fanazavana dia ilana fifanatrehana ny mizana tsindrian’ila lava amin’ity ministera iray ity ary mila vakiana bantsilana ihany koa ny teti-dratsy madinidinika mampikatso ny famahana ny krizy ataon’ny ekipan’i tgv.
Manohana ny vahoaka raha …
Nanao antso avo ho an’ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara kosa ity CT avy any Vakinankaratra ity teo am-pamaranana ny lahateniny. « Tsara ny tanjona tianao ho tratrarina » hoy izy « ary manohana anao ny vahoaka raha sahy manafoana ireo didim-pitsarana manana endrika politika rehetra ianao ». Nankahery ny vahoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ihany koa moa ny tenany mba hijoro ho herin’ny famerenana ny ara-dalàna hatrany ho fitaratra ho an’ny any amin’ny faritra rehetra.
Famotsoran-keloka : ho an’ny rehetra … arakin’ny hevitrin’ny maro (+vidéos)
Raha ny ara-dalàna dia tsy misy idiran’ny Filoha RAVALOMANANA ny mikasika ity lalàna momba ny famotsoran-keloka ity satria efa nambara ombieny fa tsy mahefa ny fitsarana namoaka didy momba azy. Ny tanjona amin’ny ady atao momba ity lalàna ity anefa, araka ny fanazavana, dia ny hanamorana arak’izay azo atao ny fiverenany an-tanindrazana. Mbola maro manko ireo tsy maty voalavo an-kibo ka tsy ho menatra ny hanao zinona ny lalàna noho ny « halako bika tsy tiako tarehy ».
Ankoatr’izay koa anefa dia ny hampihena, eny hanafoana mihitsy, ny gadra politika no tena tanjon’ny Ankolafy. Efa nambaran’ny Filoha tamin’ny tafa nataon’ny tamin’ny vahoaka Malagasy fa ny fifampiresahana no vahaolana fototra ary tsy maintsy iverenana mba hamoahana an’i Madagasikara amin’ny krizy. Tsy ho tanteraka velively anefa izany raha tsy mitovy zo ny tsirairay ka afaka mifanakalo hevitra tsy misy tahana na tahotra.
Avondrona ny hery
Araka ny nambaran’ny CST Leriva Manahirana dia hisy fotoana tsy hahitana azy ireo eny an-kianja ao anatin’ny roa herinandro. Ny antony dia tsy tokony hanome vahana ny mpanonam-panjakana ny Ankolafy RAVALOMANANA any anaty andrim-panjakana. Noho izany dia tsy azo bangana loatra ny toerana amin’ny ady hevitra politika mamaivay toa izao. « Raiso ny andraikitra » hoy izy « satria tolom-bahoaka ity ». Nangataka kosa anefa izy mba tsy ho lahateny fifanaratsiana anaty no hatao amin’izany fotoana izany fa fifankaherezan’ny tsirairay amin’ny anjara manandrify azy hanamorana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA.
Niasa sahady …
Nanomboka ny tapak’andro hariva teo dia nikatona tanteraka ny foiben’ny Ankolafy RAVALOMANANA eny Belair Ampandrana. Izany dia noho ny asa goavana atrehin’ireo parelemanteran’ny tetezamita avy amin’ity Ankolafy ity mikasika indrindra ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka. Manampy azy ireo amin’izainy ireo mpahay lalàna isan-karazany miara-miasa amin’ny Ankolafy sy ny Filoha RAVALOMANANA.
29 Martsa 1947 : mijoro vavolombelona i Ranaivomanana (+vidéo)
Isan’ireo Malagasy niharan’ny tsindry hazo lena nataon’ny mpanjanaka tamin’ny taona 1947 i Ranaivomanana. Tany amin’ny faritra Mandialaza Manjakandriana ny tenany no nonina tamin’izany fotoana izany. Nibaby ny herisetran’ny Frantsay ny tenany ary mbola mitondra takaitra noho izany hatramin’izao. Ny fotoana voalohany nitondrany maharary dia namoizany ny rahalahiny sy ny zaodahiny ary naha-voatifitra azy teo amin’ny tanany. Vao maika nampiboiboika ny fitiavan-tanindrazana amin’izy ireo anefa izany ka nanohy ny ady tamin’ny mpanjanaka izy ireo.
Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ity Raiamandreny ity dia lefona sy kanota no nentin’izy ireo niatrika ny basin’ny menasofina sangy tsy nampihemotra azy ireo izany. Tao anatin’ny fifandonana anefa dia isan’ireo naratra mafy ny tenany ary amam-bolana no nitolona tamin’ny fahafatesana. Mitaraina izy ankehitriny satria tsy mbola nahazo izay mba fanampiana ho an’ny maherifon’ny Firenena na dia efa nandefa fangatahana momba izany aza. Nambarany anefa fa « misy ireo tsy naratra akory nefa mandray vola amin’izao fotoana ».
Ra-Guy : « Beriziky, raiso ny andriakitra raha mbola vonona … » (+vidéo)
Fantatra fa tokony misy filan-kevitry ny governemanta sy filan-kevitry ny ministra androany sy rahampitso. Taorian’ny ady mafy natrehin’ny gadra politika miaramila teny amin’ny fitsarana ny herinandro teo dia nanao antso avo ho an’ny praiminisitry ny tetezamita ny solotenan’ny gadra politika. Nambaran’i Ra-Guy fa « fotoana mbola ahafahan’i Beriziky maneho ny maha-iaraha-manana azy izao ».
Nomarihiny mantsy fa amin’ny tetezamita toy izao dia ny praiministra no lehiben’ny fahefana mpanatanteraka fa ny filoha dia mitana toeram-boninahitra fotsiny ihany. Amin’ity gadra politika efa nahefa sazy ity dia tokony manaja ny teny nomeny amin’ny fanatanterahana an-tsakany sy an-davany ny tondro zotra ny praiministra fa tsy miandrandra volana sy kintana avy amin’ny mpanongam-panjakana. Nomarihiny koa anefa fa tokony mifanampy amin’i Beriziky ireo ministra avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA mba hahatratrarana ny fametrahana ny fitoniana eto Madagasikara ka hahafahan’ny Filoha miverina malalaka.
Nisantatra ny fandresena ny teo amin’ny Magro
Nosafidiana ho andro nifampiarahabana nahatratra ny taona 2012 ny andron’ny 17 Martsa ho an’ny mpandala ny ara-dalàna. Fanentanana isan-karazany sy nofon-kena mitam-pihavanana no niarahana teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany. Nanotrona izany ny ankamaroan’ireo olom-boatendry avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ary ny vahoaka no tena tompon’ny lanonana.
Araka ny fanazavan’ny Depiote Jules Andriamaholison dia « efa santatry ny fandresean tsy ho ela izao fiarahana izao ».Isan’ny antony nisafidianana ny datin’andro androany izany raha ny fanazavany ihany. Afa-po tanteraka tamin’ny hafanam-pon’ny mpiara-mitolona izy ireo araka ny nambarany satria mbola hita ny fankafizan’ny Malagasy izany Filoha RAVALOMANANA izany. Nandray vahiny ihany koa ny kianjan’ny Finoana raha ny vaovao voaray satria nisy ireo fianakaviana sahirana teny amin’ny manodidina an’i Behoririka no niara-nisakafo tamin’ny zanak’i Dada nandritra ny fifampizarana ny nofon-kena mitam-pihavanana sy ny tolakandrom-piravoana nomanin’ny mpikarakara. Nanaporofo ny hamamin’izany Filoha RAVALOMANANA izany ny hetsika androany satria na dia maro aza ireo mpanakanto nanafana ny lanonana dia mbola ireo "hiran’i Dada" ihany no tena nahazo ny hafan’ny sehatra sy ny fankasitrahan’ny vahoaka niara-nifaly.
Gadra politika : mbola misy 30 mahery (+vidéo)
Miaramila telopolo ary sivily valo no mbola any am-ponja noho ny raharaha politika ankehitriny. Raha ny fantatra dia ny 19 Marsta izao no hanomboka ny fitsarana ny raharaha BANI ary ny 22 sy 23 Martsa kosa hy FIGN. Ny fito amin’iero sivily dia voasambotra tamin’ny 21 febroary nandritran’ny fiatsenana ny Filoha RAVALOMANANA. Manao antso avo amin’ireo mitonona ho tompon’ny fahefana ny fikambanana miahy azy ireo mba hitsara araka ny rariny sy ny hitsiny fa tsy hatao ho fitaovana politika indray ny fieren’ny osa.
Olon’ny FATE no hitsara …
Mikasika ireo miaramila manokana dia manamboninahitra ambony avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Na dia feno fanahiana tokoa aza izy ireo ankehitriny dia mbola mampahatsiahy hatrany fa ilaina ny fifampihavanana amin’ny samy miaramila mba tsy hiverenan’ny krizy intsony. Nanterin’izy ireo ihany koa fa tsy nivonona hanakorontana ny tondro zotra izy ireo fa mikatsaka kosa ny hananganana « armée républicaine » mba tena ho manda tehezana amin’ny fanavotana ny Firenena. Raha ny resaka BANI manokana dia fantatra fa mpanolo-tsaina manokana an’ny ministry ny fitsarana FATE no hitsara izany indrindra ny raharaha Ranjeva sy ny zanany vavy.
Miantso ny fahaleovantenan’ny fitsarana araka izany ny fikambanana « Mahery fon’ny Firenena 2009 » satria fototry ny fitoniana ny fandraisana fanapahan-kevitra marina sy rariny. Efa nanatitra antotan-kevitra tany amin’ny FFKM rahateo izy ireo nandritra ny fihaonana tamin’ny SEFIP andro vitsy lasa izao.
Andron’ny vehivavy : nidina an-dalam-be ny tao amin’ny Magro (+vidéo)
Tsy nahahetsika ny EMMOREG fa voan’ny vehivavy tamin’ny tampoka. Nanao rodobe naneho hevitra nanodidina an’ny Behoririka sy Antanimena ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna androany nandritra ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy. « Vehivavy tsy mivadi-belirano amin’ny Filoha RAVALOMANANA » no loha-hevitra nentin’ny vehivavy « légalistes » niatrika ny andro androany.
Ny hetsika izay notarihin’ny vehivavy TIM rahateo dia natao nanehoana amin’izao tontolo izao ny olan’ny vehivavy Malagay sy ny vahaolana aroson’izy ireo hamahana izany. Araka ny fanazavana nentin’ny solontenan’ny mpikarakara dia nihamafy ny sedra lalovan’ny andriambavilanitra malagasy tao anatin’ny telo taona izao noho ity krizy politika tsy mety voavaha ity. Fantatra mantsy fa efa tany amin’ny fotoanan’ny ady lehibe voalohany no nanomboka ny tolon’ny vehivavy manerana ny tany ho fampanajana ny zony saingy ankehitriny dia mbola maro ny Firenena tsy manaja izany ary ny eto Madagasikara manokana dia mbola ahitana antsojay ara-tsosialy sy ara-piaraha-monina maneho ny fanaovana zinona ny vehivavy. Tsapa tamin’ny sora-baventy isan-karazany nolanjain’ny vehivavy androany fa tena efa rerakin’ny fiainana izy ireo ary mitaky ny fiverenan’ny ara-dalàna mba hahafahana mampijoro hoavy mamiratra ho an’ny taranaka Malagasy.Ankoatra ny fidinana an-dala-be sy ny fanentanana politika dia nisy ihany koa ny ody ambavafo izay nifampizaran’ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna tamin’ireo mpitolona arivo tonga voalohany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka.
Diaben'ny vehivavy "légalistes" :